ဖြူ စင်သောစိတ်ကလေး: March 2013
ယောက်ကျားတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကို ခန့်မှန်းရတော်တော်ခက်တယ်ဆိုတာ ဒီရေ နဲ့ ပြန်ဆုံပြီး နောက်ပိုင်းမှ ပိုပြီးသိလာသလိုပဲ။ဒီရေနဲ့ ပထမဆုံးပြန်တွေ့တဲနေ့က သူ့ရဲ့ အပြုံး သူ့ရဲ့ အကြည့်တွေက နောက်တစ်နေ့ကျွန်မနဲ့ သူပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာ အားလုံးပျောက်ကွယ်သွားကြတယ်။ နောက်သူနဲ့ ကျွန်မဆက်ဆံရေးက အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား ဆက်ဆံရေးထက် မပိုပြန်ဘူး။ တစ်နေ့လုံး နေလို့မှ သူနဲ့ ကျွန်မ တစ်ခါလောက်တောင် မတွေ့ဖြစ်။ အဲ…ဒါဆိုရင် သူပျောက်သွားတဲ့နှစ်တွေမှာ ကျွန်မကို မေ့နေသလားဆိုပြန်တော့ ။အဲဒီနေ့က ကျွန်မ အလုပ်တွေများနေတာနဲ့ နောက်ကျနေခဲ့တယ်။ အလုပ်ပြီးလို့ နာရီကြည့်လိုက်တော့ ၇ နာရီခွဲ။ အိမ်ပြန်ဖို့ ခပ်မြန်မြန်ပြင်ဆင်လိုက်ပြီး ထွက်တော့မယ်ဆိုမှ ..
“လှိုင်း ….စားမေးပွဲနောက်ဆုံးနေ့ က ကျွန်တော့်ကို စောင့်နေခဲ့သေးလားတဲ့ ။”
. ရုတ်တရက်ကြီး အမေးခံလိုက်ရတာမို့ အရမ်းကို အံ့သြသွားမိတာ အမှန်။
“အင်း ဟုတ်တယ် စောင့်နေခဲ့သေးတယ်။ ရှင့်ရဲ့ထီးလေးကို ပြန်ပေးမလို့ လေ”
“ဟုတ်တယ် ကိုယ့်မေမေ ဆေးရုံတင်လိုက်ရတယ်လေ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကံဆိုးတယ် ကိုယ် ဆေးရုံရောက်တော့ မေမေ ဆုံးသွားပြီ”
သြော် သူဒါကြောင့်ပျောက်သွားတာကိုးလို့ နားလည်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူက သူ့ရဲ့ ရုံးခန်းထဲပြန်လှည့်ဝင်သွားတယ်။ ကျွန်မမှာသာ ဘယ်လိုခံစားလို့ ခံစားရမယ်မှန်းမသိဘူး။ တစ်ကယ်ဆို ဒီကိစ္စကို ပြန်မပြောပြလဲ ဖြစ်နေတာပဲ ။ ဒါပေမယ့် ဘာလို့ ကျွန်မကို ပြောပြချင်ရပြန်တာလဲ ။
အဲဒီလိုမျိုးက တစ်ဖုံ။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ .
“လှိုင်း က လှိုင်း မေမေ နဲ့ တူလားတဲ့ “..
ခက်တာပဲ ကျွန်မကို မွေးပြီးပြီးချင်းဆုံးသွားတဲ့ မေမေ့ ကို တစ်ခါမှ မမြင်ခဲ့ဖူးဘူး။ ဖေဖေ ရဲ့ မေတ္တာတွေအားလုံးကိုပဲ ရထားလို့လားတော့ မသိဘူး ကျွန်မရဲ့ ဘ၀မှာ မေမေ မရှိဖူးရယ်လို့ တစ်ခါမျှ အားမငယ်ခဲ့ ဖူးဘူး။
“ဟိုလေ အဲဒါ ဒီရေ ကဘာလို့ မေးတာလဲ”
“အဟင်း သမီးလိုချင် အမေကြည့်တဲ့ အဲဒါကြောင့်မို့ပါ ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး ” တဲ့။
သြော် သမီးလိုချင် အမေကြည့်တဲ့ ဆိုတဲ့စကားက အမေးခံရတဲ့ ကျွန်မအတွက် ဘာမှ မဟုတ်ဘူးတဲ့လား။ သူမေးလိုက်တာက ကျွန်မရဲ့ အမေလေ။ ဒါဆို သူက ကျွန်မကို ..လို ချင်..အ…အ.အာ…. မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်ကသာ မေးခွန်းတွေ မေးပြီး စိတ်ထဲဗျာများနေတာ ဒီရေ ကတော့ အဲဒီလို မေးချင်တာလေး တစ်ခွန်းမေး ပြီးရင် ကျောခိုင်းပြီး ထွက်သွားပြီ။ ကိုယ့်မှာသာ တစ်ကိုယ်တည်း မေးခွန်းတွေနဲ့ ကျန်ခဲ့တာ။
“လှိုင်း ရှင့်ရဲ့ ဒီရေ က ထူးဆန်းတယ်နော်။ ”
“အင်း ..ဘာဖြစ်လို့လဲ အမြီးပေါက်ပြီး ဂျိုထွက်နေလို့ လား.”
“အဟမ်း..အဟမ်း ..”ချောင်းလန့်သံကြားလို့ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ သူက အပေါက်ဝမှာ မတ်တပ်ရပ်လို့ မျက်နှာက ပြုံးစိစိနဲ့.။ ပြီးတော့ ပြောသွားသေးတယ် အနားနား ကပ်ပြီး
“ကိုယ်သေချာတယ် လှိုင်းပြောတဲ့ အမြီးနဲ့ဂျို ကိုယ့်မှာ မရှိဘူးတဲ့ ”
ကျွန်မ မှာ မျက်နှာဘယ်လိုထားလို့ထားရမယ်ကို မသိတာ။ တစ်ကယ်တော့ မီ က ဒီရေနဲ့ ကျွန်မကို နေ့တိုင်းစနေလွန်းလို့။ ဒီနေ့လည်း မီ က မစခင် ကျွန်မက ကြိုပြီး ဘုတောလိုက်တာ။ ဖြစ်ချင်တော့ သူက ကျွန်မတို့အခန်းရှေ့ရောက်နေတာ။ မီ ကိုပဲ စိတ်ထဲမှာ ကြိတ်ပြီး ကြိမ်ဆဲ ပစ်လိုက်တယ် ။ မီ ကတော့ သူ့ကို ကျွန်မမဲနေမှာစိုးလို့ လား မသိ အခန်းအပြင်ဖက်ကို လျှာလေးထုတ် ခေါင်းလေးပုပြီး ထွက်သွားပြီ။
တစ်ကယ်လည်း မီ တို့စချင်လည်း စချင်စရာ။ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်မရဲ့ စားပွဲရှေ့ကနေ အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာပြီး ခေါက်တုန့်ခေါက်ပြန်လျှောက်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ကျပြန်တော့ တစ်ပတ်လုံးနေလို့မှ သူ့မျက်နှာတစ်ခါလောက်တောင် တွေ့ရသည်မရှိ။ တစ်ခါတစ်လေ ကျပြန်တော့ နေ့လည်စာ ကျွန်မစားဖို့ဆိုပြီး ပို့ခိုင်းပေးတတ်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူနဲ့ ကျွန်မရဲ့ ဆက်ဆံရေးကတော့ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမားထက် ပိုသည်လို့မရှိ။ သူ့ကို ကြည့်ရတာ နေ့တိုင်းအရောင်ပြောင်းနေသလိုပဲ။ သူ့ရဲ့ စိတ်ကို ခန့်မှန်းရတာ ကျွန်မအတွက်တော့ အဖြေမရှိတဲ့ ပုစ္ဆာတွက်တစ်ပုဒ်ကို တွက်နေရသလိုပဲ။
သြော် ဒီလိုနဲ့ပဲ ဇာတ်မျှောကြီး ဖြစ်တော့မယ်ထင်ပါရဲ့။
“လှိုင်း ရှင့်ကို ချစ်တယ် လို့မပြောသေးဘူးလား။ ဘေးကကြည့်နေတဲ့ သူတောင် သိတယ် .။ လှိုင်း ကို စိတ်ဝင်စားနေတယ် ဆိုတာ”
“တစ်ခါတစ်လေကျရင်လေ လှိုင်း ကို သူက တမင်ရှောင်နေသလိုပဲနော်။”
“အဲ…..ဒါပေမယ့် လှိုင်းကိုတော့ ဂရုစိုက်သား။ လှိုင်းမှာ ထမင်းချိုင့် မပါတဲ့နေ့ဆို သူဘယ်လို ကြည့်နေလဲ မသိဘူးနော်။ ထမင်းလာဝယ် ပို့ရော”
“အင်း ..နတ်မျက်စိ ရှိတယ် ထင်တယ်”
“ဟာ လှိုင်း ကလဲ မီက အတည်ပြောနေတာကို”
“အေးလေ ကျုပ်ကရော အပျော်ပဲ ကြိုက်မှာပါလို့ ပြောနေလို့ လား”
“လှိုင်း နော် နောက်တီး နောက်တောက်နဲ့ မီ ကတစ်ကယ်ပြောနေတာ။ အသက်တွေလည်းကြီးပြီး ကြိုက်ရင်လဲ မြန်မြန်ယူကြပြီးရော ”
“ဟဲ့ မီရယ် ကျုပ်ကယူပါ့မယ် ဆိုတာတောင် ရှင့်ရဲ့ အခန်းထဲက ဘိုးတော်က ခဏနေဦး ပုတီးစိပ်နေတယ် ဆိုတော့ ဟောဒီက မိလှိုင်း ဘာလုပ်နိုင်မှာတုန်း။ ဂတုံးတုံး အ၀တ်ဝါလေးဝတ်ပြီး ကြိုဆောက်ထားတဲ့ ဇရပ်မှာ စောင့်နေရုံပဲ တတ်နိုင်တယ်။”
“အေးဟေ့ စောင့်စောင့် နော်။ တော်ကြာ သူများနောက်ပါသွားမှ မိလှိုင်းတို့ ရင်ကွဲပက်လက်နဲ့ မီ ရယ် ဆိုရင်တော့ လေ ”
အဲဒီတုန်းက မီ ပြောခဲ့တာ ကျွန်မအတွက် ကြိုတင်နမိတ်များလား မသိပါဘူး။ နောက်ထပ်လအနည်းငယ်လောက်အကြာမှာ ကျွန်မ စာချုပ်စာတန်းအချို့ကို အစုရှယ်ယာဝင် အန်တီကြီး တစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်ကို သွားပို့ပေးရတယ်။ ခဏစောင့်ပါလို့ပြောပြီ ဓာတ်ပုံ အယ်ဘမ် တွေရှေ့ချပေးခဲ့တာနဲ့ ကျွန်မလည်း ဘာရယ် မဟုတ်ဘူး ယူကြည့်မိလိုက်တယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ကျွန်မအတွက် ရင်ကွဲပက်လက်ဖြစ်စေမယ့် ဓာတ်ပုံအချို့ကိုတွေ့ခဲ့တာပဲ။
“အန်တီ ဒီဓာတ်ပုံတွေ က …”
“သြော် ဟုတ်တယ် သမီးရဲ့ ဒါ ဒီရေ တို့ စေ့စပ်ပွဲနေ့က ရိုက်ထားတာလေ။ ကြာပြီ ကောင်မလေးက ခုနိုင်ငံခြားမှာလေ။ အန်တီရဲ့ တူမပေါ့။ ခုခောတ်ကလေးတွေများ နားကို မလည်နိုင်ပါဘူးကွယ်။ စေ့စပ်ထားတာ နှစ်နှစ်ကျော်ပြီ ခုထိ လက်ထပ်ပွဲ ကိုဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့နဲ့။ ဒီရေ ဖေဖေ နဲ့ တိုင်ပင်ထားတာတော့ ဒီနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်တော့ မင်္ဂလာပွဲကို မရရအောင် စီစဉ်မှဖြစ်မယ်လို့။ အန်တီတို့ ဘက် က မိန်းကလေး ရှင် မဟုတ်လား..”
“အင်း…ဟုတ် ဟုတ် တာပေါ့…”
လို့ ၀ဲလာတဲ့ မျက်ရည်ကို မသိမသာလေး ထိန်းရင်း တုန်ယင်နေတဲ့ အသံ.
“အန်တီ သမီးကို ပြန်ခွင့်ပြုပါအုန်းနော် .”
လို့ နှုတ်ဆက်ရင်း ထပြန်လာခဲ့တယ်။
အပြန်လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ အိမ်အပြင်မှာ မိုးတွေသည်းနေတယ် ဒီရေ …..
--------ဒီရေ လှိုင်း ဇာတ်သိမ်းလေးကို တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်လေးရေးပြီး တင်ပေးပါ့မယ်လို့ မှာရင်း
ဘလော့ သူငယ်ချင်း မောင်နှမ များအားလုံး ကျန်းမာလို့ ချမ်းသာကြပါစေရှင်။
ဖေဖေ ကတော့ပြောဖူးတယ်။ ကျွန်မမွေးပြီးကာစ ကျွန်မရဲ့ မျက်နှာလေးကို မြင်လိုက်ရုံနဲ့တင် ဖေဖေရဲ့ စိတ်ထဲမှာဖော်မပြနိုင်လောက်တဲ့ ကြည်နူးမှုတွေနဲ့ ရင်ထဲမှာ လှိုင်းထန်သွားသလို လှုပ်ခနဲ ဖြစ်သွားတဲ့ ခံစားချက်မျိုးဖြစ်မိတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် ကျွန်မရဲ့ နာမည်ကို ထူးထူးခြားခြား တစ်လုံးတည်း လှိုင်း ဆိုပြီး ခေါ်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့။ ဘာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ လူတိုင်းမှာ နာမည် အမည်သညာ တစ်ခုဆီရှိကြတာပါပဲ ။ အထူးအဆန်းမှ မဟုတ်တာ။ အဲ ထူးဆန်းတာက ဒီနေ့မှ ကျွန်မတို့ရဲ့ ၁၀ တန်း (B) ခန်းကို ပြောင်းလာတဲ့ ကောင်လေးပဲ။ သူ့နာမည်က ဒီရေ..တဲ့
အတန်းပိုင်ဆရာမက ကျောင်းသားသစ်ရဲ့ နာမည်ကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် တိုးတိုး တိုးတိုး ထွက်လာတဲ့ အသံက ဒီရေ …လှိုင်း ဒီရေ …လှိုင်း တဲ့။ ခက်တာပဲ။ အဲကောင်လေး ပုံစံကြည့်ရတာတော့ နည်းနည်းလေး မာရေ ကြောရေ နိုင်မယ့်ပုံ။ ဟွန်း ပုံစံကိုက မာန်ပဲ တင်းနေသလိုလို မာနပဲ ကြီးသလိုလို မျက်နှာက ဖြူဖတ်ဖြူရော်နဲ့ ဒါပေမယ့် သပ်သပ်ရပ်ရပ်တော့ ရှိပုံရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာလို့မှန်းတော့ ကျွန်မ မသိဘူး သူ့နာမည် ကိုတော့ သဘောကျနှစ်သက်မိသလိုပဲ။ နှုတ်ခမ်းလေး လှုပ်ရုံ ကျွန်မလဲ တိုးတိုးလေး ညည်းနေမိခဲ့တယ် ဒီရေ…လှိုင်း ..ဒီရေ..လှိုင်း လို့။
နောက်နေ့ အခန်းထဲသွားတော့ ဘယ်ကျောင်းသားတွေ လက်သရမ်းလဲ မသိပါဘူး စာသင်တဲ့ ကျောက်သင်ပုန်းမှာ ဒီရေ + လှိုင်း ဆိုပြီး ရေးပြီး စထားကြတယ်။ ကျွန်မလေ ရှက်သလို လို သဘောပဲ ကျသလိုလိုနဲ့။ သူကတော့ အဲလို မဟုတ်ခဲ့ ဘူး။ မထင်မှတ်လောက်အောင် သူ့ရဲ့ တုန့်ပြန်မှုကတော့ ပြင်းထန်လွန်းတယ်။
“အေး မင်းတို့ ဒီလို နောက်ချင်ကြတယ် ဆိုရင် လှိုင်း ဆိုတဲ့ နာမည်ပါတဲ့ မိန်းမ မျိုးနဲ့ မစနဲ့တဲ့ ။ အဲင်္ဒီ လှိုင်း ဆိုတဲ့ အသံကို ငါကြားမိတာနဲ့ အော့ နှလုံးနာလွန်းလို့တဲ့.”
ကျွန်မလေ ကြားမိကာစကဆို ရှက်လဲရှက် . ပြီးတော့ ကျွန်မက သူလိုလူတစ်ယောက် အော့ နှလုံးနာစရာ ဘာများရှိနေလို့ လဲ။ သူ့ကို ကျွန်မလဲ တစ်ခွန်းပဲ အဲဒီနေ့ က ပြန်ပြောခဲ့ ပါတယ်။
“ရွယ်တူ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ဒီလို နိမ်နိမ်ချချ ပြောတတ်တဲ့ ယောက်ကျားမဆန်တဲ့ ယောက်ကျားတစ်ယောက်ကို တွေ့ဖူးတာ ငါ့ဘ၀မှာ ဒါဟာ ပထမဆုံး အကြိမ်ပဲလို့ ”
အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျွန်မထင်ထားခဲ့တာ ကျွန်မသူ့ ကို မုန်းတယ်လို့ ပေါ့။ သူ့ကြောင့် ကျွန်မ အရှက်ရခဲ့တာ။ နောက်နေ့တွေမှာတော့ ကျွန်မသူ့ကို မကြည့်မိအောင်နေတယ်။ ဂရုမစိုက်သလို နေတယ်။ သူနဲ့ ကျွန်မ မျက်နှာချင်းမဆိုင်မိအောင် နေခဲ့တယ်။ သူဆိုတာ ကျွန်မဘ၀မှာ မရှိအောင်နေခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီိလို ဂရုတစ်စိုက် မေ့ဖျောက်ခဲ့မိတာကိုးက ဒီရေ ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက် ကျွန်မရဲ့ စိတ်ထဲကို ရောက်မှန်းမသိ ရောက်လာခဲ့တာပဲ။
ကျွန်မတို့ ၁၀ တန်းစာမေးပွဲတွေ မနက်ဖြန်ဆို နောက်ဆုံး တစ်ဘာသာပဲ ဖြေရတော့မယ်။ ရှေ့ဘာသာတွေ အကုန်လုံး ကိုယ်မှန်းထားသလောက်ဖြေနိုင်တာမို့ စိတ်ထဲမှာအရမ်းကို တက်ကြွနေမိတယ်။ အချိန်ရသလောက် မေးခွန်းနဲ့ အဖြေတွေ ပြန်တိုက်ပြီး အချိန်ပြည့် ခေါင်းလောင်းထိုးမှပဲ စာမေးပွဲခန်းထဲက ကျွန်မထွက်ခဲ့မိတယ်။ အပြင်ရောက်တော့ မထင်မှတ်စွာပဲ မိုးကရွာနေတယ်။ ဒုက္ခပါပဲ ဖေဖေ့ကားက လမ်းထိပ်မှာပဲ စောင့်နေမှာ။ ကျောင်းရှေ့လမ်းက ကျဉ်းလွန်းတော့ ကားတွေ အရမ်းကြပ်နေလို့ လမ်းထိပ်မှာပဲ စောင့်ပါလို့ မှာထားတာ။ ဒီအချိန်အခါမဟုတ်တဲ့ မိုးကြောင့်တော့ ခက်တာပဲလို့ စိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်မိတယ်။
တစ်ကယ်အံ့သြစရာပဲ ကျွန်မရဲ့လွယ်အိတ်ကို ရုတ်တရက်ဆွဲယူုပြီး ထီးကို ဖျတ်ကနဲ ထည့် ပြီးတော့ လစ်ခနဲပြေးထွက်သွားတဲ့သူက ဒီရေ တဲ့ ။ ရှင်ဘယ်လိုလူလဲ ဒီရေ ရယ်။ ရှင်ပဲ အော့နှလုံးနာတဲ့ လှိုင်း ဆို ။ အဲဒီနေ့က ကျွန်မရဲ့ စိတ်ထဲ ကျေနပ်သလိုလို သူ့အပေါ်ထားတဲ့ အမုန်းတွေပဲ ပျောက်သွားသလိုလို မိုးရွာကြီးထဲမှာ သူပေးတဲ့ ထီးလေးဆောင်းပြီး လျှောက်နေရတာကိုးက ပိုပြီး လုံခြုံမှု အေးမြမှုတွေ ရှိနေသလိုလို။ အိးု ..သိတော့ပါဘူး ဘာမှန်းကို။
နောက်နေ့ စာမေးပွဲပြီးတော့ သူ့ရဲ့ ထီးလေးကို ပြန်ပေးဖို့ ကျွန်မ သူတို့အခန်းရှေ့က စောင့်နေမိသေးတယ်၊ ။ဒါပေမယ့် အဲဒီနေ့ထဲက ဒီရေ ဆိုတဲ့သူ ကျွန်မရဲ့ ဘ၀ထဲကနေ အပြီးပျောက်ကွယ် သွားခဲ့တာ ဒီနေ့ ဒီချိန်ထိပဲ။ ခုချိန်ထိ သူ့ရဲ့ ထီးကလေးကို ကျွန်မသိမ်းထားမိသေးတယ်။ တစ်နေ့နေ့ ပိုင်ရှင်ပြန်လာရင် ပြန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပေါ့။
“လှိုင်း ရေ မနက်ဖြန် company ကို စောစောလာပေးနော်။ ဦးထင်လင်းထန်ရဲ့ သား ဒါရိုက်တာပေါက်စ အသစ်စက်စက်လေးက ရုံးစပြီး တက်မဲ့ ရက်ပါတဲ့ ရှင်။ ”
“ဟုတ်ကဲ့ ပါ ဒေါ်မီမီခင် ရှင်။ နေပါအုန်း မနက်စောစောရုံးလာပြီး ဒါရိုက်တာ အသစ်လေးကို ကြိုရမယ့် သူက ဟောဒီက admin manger ကြီး မဟုတ်ဘူးလား။”
“ဟုတ်တော့ ဟုတ်တာပေါ့ လှိုင်းရယ် ကျွန်မတို့က ရှင့်လို အပျိုကြီး တစ်ကိုယ်တည်း ဟုတ်ဘူးရှင့် ။ သားနဲ့ သမီးနဲ့ ယောက်ကျားနဲ့ ဆိုတော့ အလုပ်များတယ် ။ လုပ်ပါ သူငယ်ချင်းလေးရယ် နော်..နော်”
မီ ဆိုတာက ကျွန်မရဲ့ တက္ကသိုလ်တက်ထဲက သူငယ်ချင်း ခုလဲအလုပ်ထဲမှာ တူတူဆိုတော့ ကိုယ့်လက်အောက် လူဆိုပေမယ့်လည်း ဒီလိုပါပဲ ငဲ့နေရတာနဲ့ မနက်ဖြန် ဒါရိုက်တာပေါက်စ အတွက် ကျွန်မပဲ ရုံးစောစောလာရတော့မှာပေါ့။ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ သူငယ်ချင်းကို ကျွန်မ ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်တာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် မီ ကတော့ သူ့သားကျောင်းကြိုဖို့ မမီမှာစိုးတာနဲ့ ပြေးရှာပြီ။ ဟွန်း ဒါကြောင့် ယောက်ကျားမလိုချင်တာ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အေးအေးဆေးဆေး နေလို့ ရတဲ့ဟာကို အလကား မိန်းမတွေများ ဒုက္ခခံချင်ကြတာပဲ။
နောက်တစ်နေ့မနက် ရုံးရောက်တာနဲ့ ဒါရိုက်တာပေါက်စနေမယ့် အခန်းမှာ ဘာတွေများလိုအပ်သေးလဲစစ် သူ့ အတွက်ခန့်ပေးထားတဲ့ အတွင်းရေးမှူးမလေးရောက်လာတော့ နေရာချပေးနဲ့ မနက် ၁၀ နာရီထိုးရော။ ဒီချိန်ထိတော့ ဒါရိုက်တာပေါက်စ မရောက်လာသေးဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ သူမခြင်းထဲ ထည့်လာတဲ့ မနက်စာ စားသောက်ခန်းထဲမှာ ထိုင်စားနေလိုက်တယ် ။ ဗိုက်ဆာလာပြီလေ မိုးကျရွှေကိုယ်က ပေါ်လာတော် မမူသေးဘူး။
တစ်ကယ်တော့ ကံကြမ္မာဆိုတာကိုယ်မမြင်နိုင်တဲ့အရာ အရမ်းကို ဆန်းကြယ်တာပဲ။ သူဟာ ကျွန်မဘ၀ထဲကို ရုတ်တရက်ဝင်လာတယ် ရုတ်တရက် ပျောက်ကွယ်သွားပြန်တယ် ဟောကြည့် ဒါရိုက်တာပေါက်စဆိုတဲ့ သူက ဒီရေ တဲ့။ တစ်ကယ်တော့လေ သူပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ ကာလတွေမှာ သူ့ဘ၀မှာ လှိုင်းဆိုတဲ့ မိန်းကလေးကို မေ့မေ့ ပျောက်ပျောက်ရှိနေခဲ့မယ်လို့ ထင်ခဲ့တာ။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ သူကျွန်မကို တွေ့လိုက်တော့ အရမ်းကို ၀မ်းသာသွားတဲ့ပုံပဲ။ ပြီးတော့ သူစကားတွေ အများကြီး ပြောချင်နေပုံ ရတယ်။ အလုပ်ကလူကြီးတွေနဲ့ တွေ့နေလို့သာ ကျွန်မကို ဘာမှ မပြောတာ။ သူစကားပြောနေရင်း ကျွန်မကို ကွက်ကြည့် ကွက်ကြည့် လုပ်နေတာ ကျွန်မသိတာပေါ့။
ပြီးတော့ ပြန်ကာနီး ကျွန်မနားကပ်ပြီး သူပြောသွားသေးတယ်
"ကိုယ်တို့ မနက်ဖြန်လောက်တော့ စကားတွေအများကြီးပြောဖို့ အချိန်ရလောက်ပါတယ်တဲ့။"
ရှင်ဟာလေ ကျွန်မကပဲ ရှင်နဲ့စကားပြောဖို့ မျှော်လင့်နေတဲ့ သူလို့များ ထင်နေသလားဟင်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီရေ ရယ် ဒီနေ့ ကျွန်မပျော်နေတယ် သိလား။
---အပိုင်း ၂ ကိုတော့ မကြာခင်တင်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။
ဘလော့ မောင်နှမ များ ကျန်းမာလို့ ပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း..အလုပ်အားတုန်းလေး
စိတ်ထဲမှာ စာစီထားတောလေးတွေ ချရေးမိလိုက်ပြန်တယ်။